गाउँ/नगरमा कुनै उत्सव तथा मेला सञ्चालन गर्नु परे के गरिएला ? यसको उत्तर सजिलो छ, चन्दा संकलन प्रयोजकको खोजी यस्तै-यस्तै । अनि आफ्नो ठाउँको प्रचार तथा प्रवद्र्धन गर्नु परे चाहिँ के गरिएला ? यसको पनि उत्तर उस्तै आउँछ, गाउँपालिका, नगरपालिका वा कुनै सरकारी दाता र प्रवद्र्धकको खोजी गर्ने । तर मकवानपुरको एउटा त्यस्तो पर्यटकीय गन्तव्य जसले आफ्नो ठाउँको प्रचार र प्रवद्र्धन गर्न गाउँले आफू आफूले नै नगद संकलन गरेर लागि परेका छन् । आफ्नो ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको लागि जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा नं. १, ५ र ६ का अगुवाहरु आफूआफूबीच पैसा उठाएर महोत्सवकै आयोजना गर्दैछन् । सन् २०१८ का लागि पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा घोषणा भएको कुन्छाल गाउँ समेत रहेको यस क्षेत्रका अगुवाहरुले आफ्नो ‘पर्यटकीय प्रडक्ट’ पर्यटन बजारसम्म मार्केटिङ गर्ने उद्देश्यले महोत्सवकै आयोजना गर्न लागेका हुन् ।
थाहानगरको ऐतिहाँसिक पर्यटकीय गन्तव्य बज्रवाराही (टिष्टुङ) को ऐतिहासिकता र आकर्षणलाई प्रचार गर्ने उद्देश्यले ‘टिष्टुङ महोत्सव–२०७५’ आयोजना गर्ने जमर्को भयो । जमर्कोलाई यथार्थमा बदल्न प्रारम्भिक स्रोत जुटाउने विषयमा छलफल चलाउँदै जाँदा मूल आयोजक समिति गठन भयो । यससंगै सचिवालय पनि बन्यो । सचिवालयमा १५ जना छन् । महोत्सवलाई शुरु गर्न तिनै सचिवालयका १५ जनाले जनही २०-२० हजारका दरले पैसा जम्मा गर्ने निधो गरे । ‘ऐतिहासिक टिष्टुङ हाम्रो पहिचान, सम्बृद्ध टिष्टुङ हाम्रो अभियान’ भन्ने नारा सहित तय भएको महोत्सव अब २४ देखि २७ असोजसम्म टिष्टुङको सरस्वती बजारमा संचालन हुने भएको छ । महोत्सव संचालन गर्नका लागि १५ जनाले मात्र अपनत्व ग्रहण गरेनन् । टिष्टुङको बजार क्षेत्रमा हुने उक्त महोत्सवमका लागि सबै स्थानीयहरुले मनदेखि सघाउने बाचा गरेका छन् । महोत्सव संचालन गर्नका लागि करिब एक महिनाभन्दा कम बाँकी रहँदा बजार क्षेत्रका पसल व्यवशायीहरुले आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सरस्वती बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक इन्द्र बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । आफ्नो ठाउँको प्रवद्र्धन गर्नका लागि थाहा–६ मा रहेको सरस्वती बजार व्यवस्थापन समिति र नेपाल संवत् ११३९ को मूल आयोजक समितिको संयुक्त आयोजनामा टिष्टुङ महोत्सव संचालन हुन लागेको हो । बजार व्यवस्थापन समिति समुदायमा स्वच्छ वातावरण व्यवस्थापनका लागि क्रियशील नगरपालिकाकै एक संरचना हो भने नेपाल संवत् मूल आयोजक समिति ऐतिहासिक तथा साँस्कृति संरक्षणमा क्रियाशील समिति हो । टिष्टुङ महोत्सव अन्य स्थानहरुमा संचालन हुने व्यापारिक महोत्सव जस्तो नभएको थाहा–६ का वडा अध्यक्ष शशीधर सुवेदीले बताए । स्थानीय उद्योगको प्रचार, टिष्टुङको ऐतिहाँसिकता र उत्पादनलाई आ–आफ्नो बजारसम्म जोड्ने महोत्सव भएको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ । सरस्वती बजारमा संचालन हुने महोत्सवमा करिब एकसय ६० स्टल रहने छन् । यि मध्ये अधिकांश स्टल बजारकै पसलहरु हुनेछन् । ‘अरु प्रवद्र्धनात्मक स्टलहरु ६० वटाजति थप्छौं’– मूल आयोजक समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने । आफ्नै ठाउँको प्रवद्र्धन गर्नका लागि जुटेका टिष्टुङबासीले महोत्सवमा आफ्नो पसलबाटै सामान विक्रि गरेपनि महोत्सवका लागि आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्न तत्पर छन्, वडा अध्यक्ष सुवेदीले भने । उनले थपे–‘टिष्टुङबासीले महोत्सव आफ्नै भनेर हामी सबैले अपनत्व ग्र्रहण गरेका छौं, यो ठूलो उपलब्धी हो, महोत्सवको यो सिकाइले अरु थुप्रै काम गर्न पनि सहज हुनेछ ।’ हाम्रो चाडवाडमा जसरी घरमा खाना, बस्न र सरसफाईमा ध्यान दिन्छौं ठीक त्यही हो महोत्सव सबैले आफ्नो–आफ्नो घर पसलमा हामी चाड आएको महशुस दिलाउँछौं, यसले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सुवेदीको विश्वास छ ।
महोत्सवमा राखिने पसल बाहेकका थप हुने स्टलहरु अधिकांश प्रवद्र्धनात्मक हुने नेपाल संवत् ११३९ मूल आयोजक समितिका संयोजक तथा महोत्सव मूल आयोजक समिति सचिवालय सदस्य प्रमोद जोशीले बताए । जोशी भन्छन्–‘हामी अन्य ठाउँबाट आएका व्यवसायीलाई स्टल राख्न दिदैनौं, यसो भन्दैमा इन्ट्री नै नपाउने भने होइनन् ।’ उत्पादन र प्रवद्र्धनलाई ख्याल गरेर त्यस्ता स्टल राखिने बताउँदै यहाँ संभव नभएको तर थाहा नगरबासीलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरु पहिचान गरेर त्यस्ता खाले स्टल आएमा भने स्वागत गर्छौ, जोशीले भने । महोत्सवमा व्यवसायिक स्टलहरु यहिँकालाई प्रवद्र्धन गरिनेछ, यहाँ नभएकालाई आकर्षण गरिने हो जोशीले उदाहरण सहित प्रष्ट्याँदै भने–‘कपडा, खाजा र खानाको लागि अन्य ठाउँका व्यवशायीलाई स्टल दिनू आवश्यकता छैन, किन भने यहिँ त्यस्ता खाले थुप्रै पसलहरु छन् उनीहरुले नै महोत्सवलाई मध्येनजर गरेर व्यवशाय संचालन गर्ने छन्, यहाँ कृषि सामाग्रीको व्यवशायी छैनन्, यसका लागि बाहिरका व्यवशायीले स्टल पाउन सक्नेछन् ।’
महोत्सवले टिष्टुङ र यहाँ आउने पर्यटकलाई जोड्ने पुलको काम गर्ने जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका सदस्य चित्र बहादुर बलामीले बताए । टिष्टुङ पुरानो ठाउँ भएको बताउँदै यहाँको ऐतिहाँसिकता र मुलुककै पुरानो गोपालीहरुको बसोबास रहेको क्षेत्र भएकोले पनि यहाँ पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने बलामीको भनाइ छ ।
टिष्टुङमा लिच्छवीकालिन शिला लेखहरु रहेका छन् । ति शिलाहरुमा टिष्टुङको चर्चा छ । यस कारण पनि यो ठाउँ ऐतिहाँसिक भएको प्रष्ट हुने उनको भनाई छ । टिष्टुङ शहरको रुपमा रहेको यहाँ पुराना दरवार तथा अड्डाहरुको भग्नावशेष रहेकोले अनुसन्धानकर्ताहरुका लागि यो ठाउँको थप महत्व रहेको महोत्सव आयोजक समितिले जनाएको छ । कुल २१ लाख ५० हजार रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको महोत्सवमा स्थानीय वित्तिय संस्थाहरु, व्यवशायी, आयोजक समिति लगायत स्थानीयहरु आफै लगानी जुटाउन कस्सिएकाछन् । एकीकृत रुपमा टिष्टुङ र सिंगो थाहानगर सहित छिमेकी इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको समेत पर्यटन प्रवद्र्धनमा महोत्सवका माध्यमबाट योगदान पुग्ने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ । महोत्सवका लागि २९ वटा उपसमिति गठन भएका छन् । टिष्टुङ महोत्सव भनिए पनि यसको उद्देश्य नाफा कमाउने नभई थाहानगरलाई नै पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रचार गर्नु नै मुख्य ‘मक्सज’ रहेको आयोजकको भनाई छ ।
पर्यटकीय ‘प्रडक्ट’ पर्यटन बजारमा ल्याइने छ । दशैको मुखैमा आयोजना हुने टिष्टुङ महोत्सवमा कुन्छाल फाँटमा फलेको ताइचिन धानको चिउराको स्वाद महोत्सवमा चाख्न पाइन्छ भने दशैका लागि घरमा लैजान पाइनेछ । महोत्सव स्थलमै चिउरा कुटेको दृश्य हेर्न पाइन्छ । चिउरा कुट्दा–कुट्दैको स्वाद चाख्न पाउनु महोत्सव पुग्दाको अर्को फाइदा अवलोकनकर्ताले लिन पाउनेछन् ।
नेवारी पोशाक ‘हाकु पटासी’ बुन्ने तौर तरिका महोत्सव पुग्नेले प्रत्येक्ष अवलोकनको अवसर पाउनेछन् । हाकु पटासी महोत्सवको चिनोको रुपमा लिन सक्नेछन् । महोत्सव पुगेका पाहुनालाई स्थानीहरुले हातैले बुनेका हाकु पटासीको खादाबाट स्वागत गरिने आयोजकले जनाएको छ । महोत्सव पुगेकाहरुले स्थानीय किसानहरुको खेतबारीमै पुगेर टपटप तरकारी टिपेर खरिद गर्न सक्छन् । ताजा उत्पादन घर जाँदा कोशीली लान सक्नेछन् । तरकारी कोशली लैजान मात्र नभई कृषकहरुका लागि सिकाइको कृषि भ्रमण समेत गराएर ज्ञान पनि आर्जन गर्न सकिनेछ । थाहानगरमै टनेलमा खेती गर्नेहरु मध्ये टिष्टुङ १ नम्बरमा पर्छ ।
यहाँ प्रचीन दरबारका भग्नावेशष तथा शिलालेख छन् । महोत्सवमा तिनीहरुको विषयमा विस्तृतीकरण प्रचार गर्ने आयोजकले जनाएको छ । यो पनि महोत्सवको अर्को आकर्षण हुनेछ । साथै स्थानीय कलाकारहरु प्रस्तुति, नेवारी समुदायको मौलिक कला तथा खानपान र साँस्कृति महोत्सवको आकर्षको रुपमा रहनेछन् ।
‘उत्सवलाई महोत्सव मात्र बनाएका हौं’
थाहा नगरपालिकाको टिष्टुङ मकवानपुरकै पहिलो नेपाल संवत मनाउने ठाउँ हो । नेपाल संवत् मनाउनुपर्छ भनेर शुरु गर्ने ठाउँ नै टिष्टुङ हो । मुलुकमा नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय मान्यता दिनू पहिले नै टिष्टुङमा नेपाल संवत्लाई उत्सवको रुपमा मनाउने चलन भएको नेपाल संवत् ११३९ का संयोजक प्रमोद जोशीले बताए ।
नेपाल संवत् मनाउन वर्षेनी एकजना संयोजक तोकिनेछ । अघिल्लो वर्षको नेपाल संवत् मनाइसकेपछि अर्को वर्षका लागि संयोजक तोक्ने चलन टिष्टुङको पुरानो हो । यो चलन स्थानीयहरुको सहभागितामा तत्कालिन सांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठको पालामा वि.सं. २०४९ सालमा शुरु भएको हो । करिब १०-१२ जनाले बाजा बजाएर गाउँ परिक्रमा गरी नेपाल संवत्को शुभकामना बाँड्दै शुरु भएको उत्सवलाई नेपाल संवत्कै सन्दर्भ पारेर टिष्टुङ महोत्सवको आयोजना गरिएको ६ नं. वडा अध्यक्ष शशीधर सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने–‘२६ वर्षसम्म नेपाल संवत्लाई उत्सवको रुपमा मनायौं अब २७ औ वर्षमा महोत्सवको रुपमा संचालन मनाउँदैछौं ।’ वर्षैपिच्छे मनाईने यो पर्वलाई आगामि वर्ष पनि महोत्सवकै रुपमा संचालन होला नहोला तर हामी संस्कृतिलाई कुनै न कुनै रुपमा निरन्तरता दिन्छौं–सुवेदीले भने । नेपाल संवत् मनाउन वर्षेनी टिष्टुङमा काठमाण्डौं, लिलितपुर, भक्तपुरलगायतका क्षेत्रमाबाट हजार बढि मानिसहरु आइपुग्छन् । यहाँ वर्षेनी मनाइने उत्सवमा यो संख्या अलि बढ्छ, यसले महोत्सवको रुप लिन्छ सुवेदीले भने । यो उत्सवलाई महोत्सवको रुपमा प्रवद्र्धन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डले सघाउने भएको छ ।
कारोबार ‘थाहा’ दिने ‘आहा’ तरिका
टिष्टुङ महोत्सवको आर्थिक पारदर्शितालाई नागरिक समक्ष कसरी पु¥याउने भन्ने सवालहरुमा मूल आयोजक समितिले भरपर्दो योजना बनाएको छ । सरकारको अधिनमा रही आर्थिक कारोबार गर्नका लागि आयोजकले आन्तरिक राजश्व कार्यालय हेटौंडाबाट पान नम्बर लिइसकेका छन् ।
महोत्सवको आर्थिक कारोबारलाई दिनदिनै लिपीबद्ध गरिने मूल आयोजक समितिका प्रमोद जोशीले बताए । उनी भन्छन्–कतिपय महोत्सवहरु आर्थिक पारदर्शीता नभएकै कारण स्थानीयले अपनत्व महशुस गर्न सकेका छैनन् त्यसैले हामी यो कुरामा चुक्दै चुक्दैनौं । स्थानीयकै लगानीमा संचालन हुने महोत्सवमा उनीहरुकै अघि हरहिसाब दुरुस्त गरेपछि आगामि वर्षहरुमा काम गर्न सहज हुने आयोजकको विश्वास छ । मूल आयोजक समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने–‘हामी भएका कारोबार थाहा दिएर आहा बन्नेछौं ।’
असोज २४ देखि २७ सम्म संचालन हुने महोत्सवको विधिवत् रुपमा २७ गते समापन भएपनि यसको आम्दानी खर्च सार्वजनिक नेपाल संवत् ११३९ शुरु हुने दिन कार्तिक २२ गते हुने मूल आयोजक समितिले जनाएको छ । लेखा परीक्षण तथा सार्वजनिक परीक्षण गरेर महोत्सवको नाफाबाट नियमानुसार स्थानीय सरकार थाहा नगरपालिकालाई कर तिर्ने मूल आयोजक समितिको अठोट छ ।